ချစ်ကြည်အေး: သူ့အကြိုက် (သို့မဟုတ်) ကျမ ချက် မိ....( အပြီး)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Fri Mar 05, 10:19:00 PM GMT+8
မယ်ချစ်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝမိခင်စိတ်ကို ရိုးရိုးလေးရေးပြတာဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ....
မောင်ဘကြိုင် Fri Mar 05, 10:52:00 PM GMT+8
အော် ချစ်တတ်လိုက်တာနော်း) အားကျလေးစားပါတယ်အစ်မရေ....
အစ်မတို့ကတော်ပါသေးတယ် ကိုကိုကျောက်တို့ဆို သနားစရာလေးဗျ
ချက်ကျွေးမယ့်သူရှာနေတာ အခုထိ မတွေ့သေးဖူးရယ်လေ
Anonymous Fri Mar 05, 10:52:00 PM GMT+8
အချစ်အတွက် ဟင်းချက်ခြင်း အနုပညာကို လေ့လာသွားပါသည်
Anonymous Fri Mar 05, 11:03:00 PM GMT+8
မှန်လိုက်တာ မအယ်က မချစ်ကြည်အေးကို အီးမေးပို့ဖို့ စုံစမ်းနေတာ။ ဒီလိုသာ နေ့တိုင်း ချက်ကျွေးနေရင်တော့ ဒွတ်ခလို့။
သိင်္ဂါကျော် Fri Mar 05, 11:16:00 PM GMT+8
အဆီဓါတ်ကို လျှော့စားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ..
Moe Cho Thinn Fri Mar 05, 11:20:00 PM GMT+8
အမကိုရတာ အကို ကံကောင်းလိုက်တာ..
sonata-cantata Fri Mar 05, 11:26:00 PM GMT+8
တို့များကတော့ စားဖြစ်ရုံသာ ချက်သူပါကွယ်
ဝက်ဝံလေး Sat Mar 06, 12:53:00 AM GMT+8
ဟင့် ပုံမပါဘူး သွားရည်မကျရတော့ဘူး ဂလု
အင်ကြင်းသန့် Sat Mar 06, 01:48:00 AM GMT+8
အင်း...တကယ်ကို မိန်းမရ ကံကောင်းတာပဲ...မမကလည်း တကယ့်ကို ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲလားနော်...ထာဝရ ချစ်ခင်စွာ နေသွားနိုင်ကြပါစေ... :))
SHWE ZIN U Sat Mar 06, 02:16:00 AM GMT+8
လေးစားပါတယ်..အဟင်း.သိပ်တော့ အလိုမလိုက်နဲ့နော် ယောက်ကျားများ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး တော်ကြာ အိမ်က ချစ်ချစ်ကြီး လာခေါ်သွားလို့ ကိုဘကြိုင်ထန်းရေဆိုင် ပါသွားအုန်းမယ်...
ဒေါ်ချစ်ကြည်အေး က တော်တော် အမြတ်ကြီးစားတယ်တဲ့ ကိုဘကြိုင်ကြီး အော်နေတယ်..သွားကြည့်လိုက်အုန်း
Wai Sat Mar 06, 03:13:00 AM GMT+8
အင်းဗျာ ဖတ်လိုက်ရတာ မြန်မာအမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါဘိ
ကျနော်တို့ တွေရဲ့ လူနေမူပါတ်ဝန်းကျင် ယဉ်ကျေးမူပုံစံ ကို ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ
Nge Naing Sat Mar 06, 04:35:00 AM GMT+8
တော်သေးတာပေါ့နော့် သိသိသာသာကြီး ဖြစ်ပြီး ဆေးခန်းပြမြန်ပေလို့၊ သိသိသာသာ မဖြစ်ပဲ တဖြည့်ဖြည့်ဖြစ်ပြီး ကော်လက်စရောလ်တွေ သွေးကြောနံရံမှာ အစိုင်အခဲဖြစ် ပဲ့ထွက်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောကို သွားပိတ်တဲ့အချိန်မှ သိရင် လုံးဝနောက်ကျသွားပြီ။ ကျွန်မလည်း အရင်က ၀က်သား တော်တော်ကြိုက်တယ် အခုတော့ အသားဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ၂၄ နာရီလုံးလုံးမှာမှ နည်းနည်းပဲလိုအပ်တယ်၊ ပိုစားလို့ အကျိုးမထူးဘူး၊ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိလို့ ၀က်သားတခုတည်း မဟုတ်ဘူး ငါးအပါအ၀င် ပင်လယ်ကထွက်တဲ့ အသားတချိ့ကလွဲပြီး မစားတော့ဘူး။ ကျွန်မ အမျိုးသားက ၀က်သားကြိုက်တတ်တော့ ကျွန်မက တခါတလေ အဆီလည်း သိပ်မများ အာဟာရလည်း ဖြစ်အောင် ၀က်နံရိုးဝယ်ပြီး ဗူးသီးနဲ့ ချက်ပေးတာ မစားဘူး သူ့ဖါသာသူ သုံးထပ်သာကိုမှ သွားဝယ်ပြီး အသေအချာ ပေါင်းစားတယ်။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မ ချက်ကျွေးတာ မစားလို့ ဟင်းတအိုးလုံး သွန်ပစ်ရပြီး နောက်ပိုင်း သူ့ကို တခါမှ မချက်ကျွေးတော့ဘူး။ ငါးတွေ၊ ပုဇွန်တွေ အသီးအရွက်တွေနဲ့ ကျွန်မချက်ထားတာနဲ့ မတင်းတိမ်ရင် သူ့ဖါသာသူ အသားတွေ သွားဝယ်ပြီး ချက်စားတယ်။ သူမီးဖိုခန်းထဲမှာ ဆိတ်သား၊ အမဲသားချက်နေရင် ကျွန်မ အနံ့မခံနိုင်တာနဲ့ မီးဖိုခန်းတံခါးနဲ့ ဧည့်ခန်းကြား တံခါးအပြင် မီးဖိုခန်း ပြတင်းပေါက်ကလွဲပြီး အိမ်မှာ ရှိတဲ့ပြတင်းပေါက်တွေအကုန်လုံးကို အပြင်ကနေ ဟင်းအနံ့ ပတ်ဝင်မှာစိုးလို့ အကုန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်အကြိုက်ချင်း လုံးဝကိုမတူဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မချစ်ကြည်အေးတို့ ကံကောင်းတယ်။
ကိုလူထွေး Sat Mar 06, 05:24:00 AM GMT+8
သူပြောမှပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အင်စတောမန့်နဲ့ အသတ်ခံနေရမှန်း သိတော့တယ်...
Vista Sat Mar 06, 10:03:00 AM GMT+8
ချစ်ခြင်းရဲ့ အနုပညာရော ချက်ခြင်းရဲ့ အနုပညာရော အကုန်သိရတာကိုး။
အဲလို ဂရုစိုက်ပြီး ချစ်ရတာလား ဟက်ဟက်...။
အပြုံးပန်း Sat Mar 06, 11:23:00 AM GMT+8
အချစ်အတွက် ဟင်းချက်တဲ့ အနုပညာ မီးမီးလည်း တတ်ပါတယ်၊ :)
မ ပြောတာတွေ သဘောကျ လက်ခံတယ်၊ သားတို့ရဲ့ မိခင်တွေကလည်း ချွေးမ သူတို့သားကို သူတို့လောက် ဂရုစိုက်ပါ့မလားပဲ စိတ်ပူကြတာပါပဲ။
မရဲ့ မွေးစားညီမတောင် ဖြစ်ချင်လာပြီ၊ ဂရုစိုက်တာခံချင်လို့။
ဇွန်မိုးစက် Sat Mar 06, 12:55:00 PM GMT+8
အင်း...အစ်မချစ်ဆီက အတုယူစရာတွေ တယ်များပါလား။ ဟင်းချက်တာအစ ယောက်ျားကိုဂရုစိုက်တာအလယ် တရားမှတ်တာအဆုံး...း)
ဇွန်ကတော့ ချက်ကျွေးစရာလူမရှိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ချက်ကျွေးပြီး ဂရုစိုက်နေရတယ်။ :D
mks Sat Mar 06, 04:03:00 PM GMT+8
မေတ္တာပေး မေတ္တာ ရ၊ ဖတ်ရတဲ့ သူတောင် ကြည်နူးပါတယ် ..
မောင်မိုး Sat Mar 06, 04:13:00 PM GMT+8
အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ အခုမှလာဖတ်ရတယ်။ ယောကျာ်းအပေါ် အစ်မက မိခင်စိတ်ရှိတယ်။ မိန်းမတိုင်း မိခင်စိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ လေးစားပါတယ်ဗျာ။ အိုအောင်မင်းအောင် ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ။
သာဓု..သာဓု..သာဓု။ ထန်းရေဆိုင်သွားရင် ကျွန်တော့်လည်း ခေါ်ကြဦးနော်။ အမြည်းလိုက်စားဖို့။ :D
မြစ်ကျိုးအင်း Sat Mar 06, 06:42:00 PM GMT+8
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ရာသက်ပန် လက်တွဲသွားဖို့ကလည်း မီးဖိုဆောင်က အရေးပါတာပဲပေါ့။ ဒီလို ဂရုတစိုက်ရှိတာလေး တွေ ဖတ်ရတော့ ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။
ကိုချစ်ဖေ Sat Mar 06, 06:52:00 PM GMT+8
ချစ်ရင်းနဲ့ချက် ချက်ရင်းနဲ့ချစ်ဖို့ သင်ယူသွားပါတယ်..(တနေ့နေ့တော့ ချက်ရဦးမည်..အားမလျှော့..ဟဲ)
မြသွေးနီ Sat Mar 06, 09:34:00 PM GMT+8
အစ်မချစ်ကြည်ရဲ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်မိတာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်တွေ ကူးစက် ခံစားမိပါတယ်။ အစ်ကိုကတော့ တကယ့်ကို ကံကောင်းတာပါလားနော်။ အစ်မလည်း ကံကောင်းတာပါပဲလေ..။
ပုံရိပ် Sun Mar 07, 09:39:00 AM GMT+8
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ကြတာ ပျော်စရာကြီးပါပဲ။
Thant Sun Mar 07, 12:49:00 PM GMT+8
အစ်မက ချစ်တတ်လိုက်တာ... :)
မယ်ကိုး Sun Mar 07, 03:07:00 PM GMT+8
မရေ... ဒီစာလေးကို ဖတ်ထားတာ ကြာပါပြီ။ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ အခုမှ မန့်ဖြစ်တာ။ မိခင်နဲ့ တူတဲ့ အချစ်မျိုးအကြောင်း မယ်လည်း ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ မိခင်လို ချစ်ချင်တယ် ဆိုတာ။ ...
မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လေ။ ကြေကွဲစရာပဲနော်။ လက်မခံတဲ့ သူတွေလည်း ရှိသေးတယ် မရယ်။
~ဏီလင်းညို~ Sun Mar 07, 03:12:00 PM GMT+8
အနော်ကတော့ ဒီမှာ ညီလေးတွေသူငယ်ချင်းတွေကို အကုန်လုံးချက်ကြွေးတာ ဒိုင်ခံပဲ....။
9-9 Mon Mar 08, 04:53:00 PM GMT+8
ကိုဇော် Tue Mar 09, 05:05:00 AM GMT+8
နာ့အမတို့များ ချစ်တတ်လိုက်နော်..အမတော်ပါမယ် ဆိုမှ...
( အမရေ အပေါ်မှာ ညီမတော်ထားတာ တစ်ယောက်ရှိတယ်နော်.. အမကြီး မရီး...ဟီးဟီး။ )
ချစ် ပါလို့ ပိုများ ချစ်တတ်နေတာလား...ဟား. . .ဟား. . .
အနော့်ကိုလည်း ရှာပေးပါလား. . ဟား. . ဟား. .
ကျေးဇူး မမေ့ပါဘူး. .ဟူး ...ဟူး. . .
( ငိုချင်းနဲ့ ပြောသွားတယ်နော်။ )
လုလု Fri Mar 12, 10:34:00 AM GMT+8
အမရယ် ချစ်ကြည်အေးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အရမ်းကို ချစ်တတ်တာပဲနော်။ အစ်ကိုကတော့ အရမ်းကို ကံကောင်းမှာပဲ။ အမလို စိတ်ထားမျိုးရှိတဲ့သူက အစ်ကို့အမေ ယောက်က္ခမနဲ့လည်း မတည့်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေနော်။ ကြည်နူးလိုက်တာ အရမ်းပဲ။ အစ်ကိုနဲ့ အစ်မတို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေနော်။ ကြည်နူးမှု ကူးစက်လာရလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
LuMin Aung Wed Jan 08, 12:23:00 AM GMT+8
ထာဝရ ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ